Hamro Kantipur | नेकपा पार्टीभित्र विवादको नयाँ रुप,सचिवालय बैठकबारे अन्यौल नेकपा पार्टीभित्र विवादको नयाँ रुप,सचिवालय बैठकबारे अन्यौल
नेकपा पार्टीभित्र विवादको नयाँ रुप,सचिवालय बैठकबारे अन्यौल
काठमाडौं, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवादले फेरि नयाँ रुप लिएको छ । पार्टी विवाद समाधानका लागि कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न तय भएको सचिवालय बैठक सरेर भोलिका लागि बस्ने टुंगो लागेपनि अन्यौल बढेको छ ।
नेकपाभित्र अहिले बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लाने विगतमा सचिवालयमा भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने विषयले विवाद बढाएको छ । अध्यक्ष ओली बामदेवलाई राष्ट्रियसभामा नलाने पक्षमा देखिएको छ । उनले ऋषि धमलासँग शनिबार प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा बोल्दै बामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लाने निर्णय पुरानो भइसकेको बताएका थिए । ओलीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको प्रशंशा गर्दै उनलाई नै निरन्तरता दिने संकेत गरेका थिए ।
ओलीको अभिव्यक्ति लगत्तै नेकपाभित्र तरंग आएको थियो । बामदेवले आफूलाई राष्ट्रियसभामा लाने विगतको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, ओलीले डा. खतिवडालाई नै बनाउने अडान लिएपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि विवाद बढेको छ ।
प्रचण्डले पार्टी निर्णय कार्यान्वयनमा जोड दिदा ओलीले खतिवडाको नाम बढाइसकेको भनेका थिए । त्यसपछि प्रचण्डले यसो गरेमा गम्भीर गल्ती हुने चेतावनी दिइसकेका छन् ।